Trump oo booqasho qarsoodi ah ku tagay Ciraaq - Halbeeg News
Trump oo booqasho qarsoodi ah ku tagay Ciraaq
BAQDAAD(HALBEEG)-Aqalka cad ee ee looga arrimiyo dalka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha dalkaasi oo ay wehlinayso xaaskiisa ay booqasho aan horay loo sii shaacin ku tageen dalka Ciraaq si ay wax uga ogaadaan xaaladaha ay ku suganyihiin ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Ciraaq ulana qeybsadaan dabbaal dagga farxadda ciidda kirishtanka.
Booqashadan uu madaxweyne Trump ku tagay dalka Ciraaq ayaa la sheegay in diyaaraddii sidday ay ka dajisay gegida ay leeyhiiin ciidamada cirka ee lagu magacaabo Al-asad kuna taalla gobolka al-Anbaar ee Galbeedka magaalada Baghdaad.
Booqashadan dhuumashaalka ah ee ee uu Trump ku tagay Ciraaq ayaa ah middii ugu horreysay ee uu madaxweynuhu ku tago goobo ay colaadi ka jirto taasoo kusoo beegantay maalmo un ka dib markii uu ku dhawaaqay in ciidamada Mareykanka uu gabi ahaanba ka saari doono dalka Suuriya muddo boqol casho gudahood ah.
Sara huckabee Sanders, afhayeenka aqalka cad ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Trump iyo xaaskiisa ay aadeen dalka Ciraaq habeenkii ciidda kirishtanka si ay ugu soo mahadceliyaan ciidamada Ameerikaanka ah ee halkaas jooga oo ay ugu hambalyeeyeen howsha wacan ee ay hayaan lana wadaagaan hambalyadooda ku aaddan ciidda kirishtanka.
Hadal uu jeediyay madaxweyne Trump intii uu ku guda jiray booqashadiisa dalka Ciraaq ayuu ku sheegay in uusan iminka qorsheyneynin in ciidamada Mareykanka laga saaro Ciraaq sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AP, Trump ayaa intaa sii raaciyay in ay suura gal tahay in dalka ciraaq ay u adeegsadaan sida saldhig millatari haddii ay Suuriya wax uga baahdaan.
Madaxweyne Trump oo mar soo hadal qaaday darbiga uu doonayo in uu ka dhiso soohdinta u dhaxeysa dalka Mareykanka iyo Mexico ayaa hoosta ka xarriiqay in uu sugayo lacag shan bilyan oo dollar ah oo kasoo xaroota dadka canshuuraha bixiyo taasoo uu doonayo inuu uu ku maal galin doono dhismaha gidaarkaas.
Dadka isticmaala Internet-ka oo ka batay kala bar dadka adduunka ku nool